टिपनटापन | NepalDut
असार २७ गते २०७६
यसरी गरौं बैठक व्यवस्थापन र माइन्यूट लेखन
कुनै पनि संघसंस्था वा कार्यालयले बैठक बसी निर्णय गर्दा लेखिने दस्तावेजलाई माइन्यूटिङ् वा निर्णय पुस्तिका लेखन भनिन्छ । निर्णय पुस्तिका लेखन विशेष गरी बैठक बसी गरिएका निर्णयहरुलाई कार्यान्वयन गर्न तथा निर्णय अभिलेखीकरण गर्ने उद्देश्यले लेख्ने गरिन्छ । कार्यालय वा संघसंस्थाका सचिवले निर्णय लेख्ने गर्छन् । निर्णय पुस्तिकामा उपस्थित सबै सदस्यहरुको दस्तखत हुने हुँदा यसले प्रमाणको रुपमा पनि काम गरेको हुन्छ । बैठकमा भएको निर्णयमा कसैको चित्त नबुझेमा Note of Decent… पुरा पढौ
यस्ता छन् तरकारी तथा फलफूलमा रहेको विषादी हटाउने घरेलु उपाय
तरकारीमा रहेको विषादी हटाउने भन्दा पनि सबभन्दा राम्रो उपाय यसको प्रयोग नै नगर्ने हो।हामीकहाँ विषादी चाहिनेभन्दा बढी प्रयोग भइरहेको छ। एकपटक प्रयोग गरेर हुने ठाउँमा पनि किसानहरूले धेरै प्रयोग गरेका छन्। अर्गानिक विषादीहरू पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। गाईको गहुत,तितेपातेको झोल,निमको पातको रस प्रयोग गर्ने चलन कम छ। छिटो नष्ट भएर जाने विषादी पनि छन्। एक हप्तामा घाम,पानीले त्यसलाई नष्ट गर्न सक्छ। विषादी प्रयोग गरेपछि कम्तीमा हप्ता दस दिन बजारमा पठाउन… पुरा पढौ
जोति मगरलाई पिसाव लागेपछि ? भिडियो सहित
https://www.youtube.com/watch?time_continue=92&v=jkN4wsb3t3I पुरा पढौ
सेक्सपछि पुरुष भुसुक्कै, महिला जुरुक्कै, कारण के हो ?
यहाँहरु सबैले सुन्नु भएकै हुनु पर्छ प्राय गरेर स्त्रीहरु आफ्नो पुरुषसँग यौनकृया गरे पछि गुनासो गर्ने गर्छन् किनभने यौन कार्य गरे लगतै प्राय पुरुषहरु निन्द्रामा पर्ने गर्दछन्। त्यसबेला स्त्रीहरु आफ्नो साथीलाई कुनै रोग लागेको छ भन्ने अनुमान गर्दछन्। तर उनीहरुको उक्त निदाउने बानीमा भने डराउनु पर्ने छैन। किनभने सबै पुरुषहरु सेक्स पछि निदाउने गर्दछन्।यस्तो किन हुन्छ भनेर तपाइहरुले सोच्नु भएको होला ? यौनकृया पछि पुरुषहरुमा आकसीटोसीन हरमोन्स मात्र ज्यादा हुने… पुरा पढौ
मुटु रोग लागेको छ कि छैन ? आफनो मुटु आफैले यसरी जाच्नुस्
अहिले विश्वमा सबै भन्दा बढी मानिस मुटु रोगका कारण प्रभावित भएका छन् । व्यस्त जीवन शैली, अस्वस्थ खानपान, व्यायाम, योग लगायको कमीका कारण पनि मानिसहरुमा मुटु सम्बन्धी रोग लागिरहेको छ । संसार भरीमै सबभन्दा बढी मानिसको मृत्यु मुटुरोगले हुनेगर्छ । मुटुरोग प्राणघातक रोग हो, तर समयमै उचित उपचार नहुनु यसको जटिलताको प्रमुखकारण मानिन्छ । जनचेतनाको कमिले मुटुरोगको समय मै पहिचान नभएर लाखौ मानिस असामयिक मृत्युको शिकार हुन पुग्छन् । अधिकांश… पुरा पढौ
आफै मर्छन् क्यान्सरका सेल, वैज्ञानिकहरुको अनुसन्धानले पत्ता लगायो
क्यान्सरका रोगीहरुमा आशा दिलाउने उद्देश्यले अनुसन्धाताहरुले एक नयाँ तरिकाको खोजी गरेका छन् । यस तरिकाबाट शरीरमा भएका केही क्यान्सरका सेल्स आफै मर्दछन् । हाम्रो शरीरमा भएका लाखौं सेल्सले हामीलाई खतरनाक सेल्सबाट बचाउन हरेक दिन आफै मर्दछन् । क्यान्सरका सेल्स भने हाम्रो प्रतिरोधात्मक प्रणालीलाई बेवास्ता गर्दै आफूलाई बचाउने बाटो पत्ता लगाउँछन् । धेरै प्रोटिन उत्पादनले आफै मर्छन् क्यान्सर सेल्स अनुसन्धाताहरुको समूहले क्यान्सरबाट बच्न एक नयाँ बाटो पहिल्याएका छन् । यो एमवाईसी… पुरा पढौ
सवारी लाइसेन्स लिन ट्रायल दिदै हुनुहुन्छ ?लिनुस् यी विषयमा जानकारी
सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स)का लागि केही कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि पूर्वजानकारी भयो भने सजिलो हुन्छ । सवारी चालक अनुमतिपत्रसम्बन्धी जानकारी बिना सवारी चालक अनुमतिपत्र कुनै पनि सवारी साधन चलाउन पाइँदैन र सवारी चालक अनुमतिपत्र नभएको व्यक्तिलाई सवारी साधन चलाउन दिँदैन । यदि कुनै व्यक्तिले बिना सवारी चालक अनुमतिपत्र सवारी साधन चलाएमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को परिच्छेद १० सजायसम्बन्धि व्यवस्था महलको दफा १६० बमोजिम पाँच… पुरा पढौ
आँखा सुख्खा किन हुन्छ ? ७ लक्षण, उपचारका कसरी गर्ने ?
स्वस्थ आँखा तथा सामान्य दृष्टिका लागि आँसु ज्यादै महत्वपूर्ण हुन्छ। आँखाको नानीको बाहिरी सतहमा (प्रि कर्नियल) आँसुको पातलो सतह (टियर फिल्म) ले लेन्सको काम गरी सामान्य दृष्टि (नर्मल भिजन) बनाउन मद्दत गर्छ। आँसुका तीन सतह हुन्छन्: 'लिपिड' सतह, 'एक्वियस' सतह र 'म्युकिन' सतह। आँसु उत्पादन गर्ने विभिन्न ग्रन्थीको समस्याले उत्पादन क्षमतामा कमी तथा सामान्य गुणस्तरको आँसु बन्न नसक्दा आँखा सुख्खा हुने समस्या आउँछ। यस्तै, गर्मी मौसममा तापक्रम वृद्धिसँगै हुरिबतास चल्ने… पुरा पढौ
गर्भवती भएको बेला यौन सम्बन्ध कसरी राख्ने ?
गर्भावस्थामा यौनसम्पर्क राख्नु हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरामा धेरै दम्पती चिन्ताले पिरोलिइरहेका हुन्छन् । गर्भस्थ शिशु वा महिलालाई केही नकारात्मक असर पर्ला कि भन्ने चिन्ता हुनु स्वभाविक पनि हो, तर यो प्रश्नको जवाफ भने सजिलै पाइँदैन, किनभने यस विषयमा झट्ट कसैसँग सोध्न सकिँदैन अनि नसोधी कसैले राम्रोसँग यस विषयमा जानकारी पनि दिँदैनन् । चिकित्सा क्षेत्रमा लागेका व्यक्तिलाई पनि यौनसम्बन्धी कुरा गर्न असजिलो लाग्ने भएकाले यसमा खुलस्त तथा पर्याप्त मात्रामा चर्चा… पुरा पढौ
थाक ठिनी: एक परिचय (भिडियो )
https://www.youtube.com/watch?v=HceyuQdcwzI कृपया यो भिडियो मनपरे लाईक गरिदिनु होला । पुरा पढौ